AVK na Satore Studio Onye Mmekọ iji Nyefee igbanwe xR Studio na Portugal | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » News » AVK na Satore Studio Onye Mmekọ iji Nyefee igbanwe xR Studio na Portugal
Lisbon dabeere AVK Soluçoes Audiovisuais ekwuputala mmekorita ya na ndi okike na ndi okacha amara Satore Studio, iji mepụta ihe eji eme ihe ohuru ohuru nke kwadoro site na oru ihe omuma (xR) ma gosiputa ihe ngosi ohuru vx 2 na rx sava mgbasa ozi. Lọ ọrụ ahụ ga-abụ nrụnye na-adịgide adịgide na-enyere AVK aka ịnyefe arụmọrụ mebere immersive na mgbasa ozi TV, ihe nkiri, vidio egwu, mgbasa ozi na mmemme ụlọ ọrụ.
"Mgbe anyị kpebiri itinye ego na teknụzụ xR, ihe ngosi mere ka anyị na Tupac Martir, onye guzobere Satore Studio, bụ onye ka kwagara Portugal," na-echeta Rui Fonseca, Injinia vidiyo na AVK. “Ahụmịhe ya na pọtụfoliyo anyị mesighachiri anyị obi ike nke mkpebi ịga n’ihu na teknụzụ. Kemgbe ahụ anyị na-emekọrịta ihe na usoro niile iji wuo ụlọ ihe nkiri ọhụrụ ahụ. ”
Satore Studio abụrụla ndị mbụ bidoro xR, ebe Martir so na ndị otu xR insider na-anwale sọftụwia ahụ tupu agbapụta ọla edo ya maka mbido Eprel 2021. “Anyị enwetalarị ọtụtụ nsogbu ndị Rui na ya chere ihu otu n'afọ gara aga, yabụ na anyị nwere ike ịdụ ha ọdụ. Thelọ ihe nkiri ahụ ga-emepe ohere iji soro ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri na ndị nọọrọ onwe ha na-eme ihe nkiri na iji dọta ụfọdụ ọrụ mba ofesi na Portugal. ”
AVK bụ akụkụ nke otu ndị nwere ndị ọrụ 250 na-agbasa n'akụkụ niile nke ahịa ọdịyo, site na mmemme ụlọ ọrụ na ngosi, ngosipụta telivishọn na akara ngosi. E webatara ndị otu ka ha gbanwee ka ọnwa Nọvemba gara aga, ka AVK Board Member, Paulo Rodam kwuru. “Anyị malitere ịchọ ụzọ iji merie ihe isi ike ndị ọrịa ahụ kpatara ma chọọ ụzọ ndị ahịa anyị ga-esi mee mmemme ha nke ọma. Anyị nọ na-achọ ngwá ọrụ kachasị mma iji wuo ihe ọhụrụ na igbe ahụ, ihe ngosi nyere anyị ngwaọrụ ndị ahụ.
“Ihe mere anyị ji họrọ xR bụ ihe ọhụụ nke teknụzụ - ikike ọ ga - ejikọ AR na MR juru anyị anya. Anyị nwere ike ịhụ ọdịnihu nke teknụzụ a ma chọọ ịbụ akụkụ nke njem ya, ”ka Fonseca na-akọwa.
AVK's 300-square-mita xR na-akwado ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke 500 square, mejupụta na ime ụlọ ejiji na ebe a na-adọba ụgbọala. O nwere ala LED 12m x 5m yana 7m guzobere na 7m gbagọrọ agbagọ Mgbidi vidiyo maka ịgbanye mgbanwe, yana igwefoto abụọ eji egwu Mo-Sys, yana atụmatụ iji kwalite na igwefoto nke atọ. Iji kwado usoro ọrụ xR, otu ahụ tinyere ego na ihe nkesa vx 2 ihe nkesa na nyiwe rx abụọ maka nnabata ọdịnaya site na Unreal Engine na Notch na-enye engines. AVK sonyekwara ụyọkọ ụyọkọ nsụgharị beta ule.
Ndị ahịa ga-ahụ ọtụtụ elele na ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ xR, Fonseca kwuru. "Ngwunye nke onyinye zuru ezu, obere ma ọ bụ enweghị nkwadebe maka ndị nwere onyinye / ndị ngosi, enweghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ihe ịtụnanya dị iche iche na AR, akara anya, na obi ike na sistemu a ga-edozi mkpa ha ma too na mmemme ha.
AVK si studio esesịn kwadoro ụfọdụ esịtidem ihe na oru ngo na Martir na APDC, Bụ ụlọ ọrụ telecoms kasị ukwuu na Portugal, nke jere ozi dị ka ihe akaebe nke echiche maka oghere ọhụrụ ahụ. Rodam na-ekwu, sị: “Ebumnuche ahụ maka ọgbakọ mkparịta ụka APDC bụ Tupac mepụtara ma bụrụ nnukwu uru nye anyị, “Anyị nwere ọtụtụ ọrụ n’aka maka ọdịnihu dị nso, gụnyere mmemme ụlọ ọrụ, mkpọsa mgbasa ozi na ihe onyonyo.
"Anyị na-ahụ xR nwere nnukwu ọrụ n'ọdịnihu nke mmepụta arụmọrụ," Rodam na-agbakwụnye. “N’ezie, anyị niile na-enwe olile anya maka ihe anụ ahụ ga - alaghachi n’udo ozigbo, ma ụlọ nka na - ahụ maka ihe nkiri na xR ga - abụ akụkụ dị mkpa nke isi azụmahịa anyị Anyị kwenyere na xR ga na-eto eto, anyị chọrọ iso ya too, ka anyị na-atụle ụlọ ihe nkiri a ma wuo ndị ọhụrụ n'oge na-adịghị anya. ”
Maka ozi ndị ọzọ na kọntaktị AVK [email protected]
Choputa ihe ngbanwe nke xR Ebe a.
ngbanwe bụ ikpo okwu maka ndị okike na ndị teknụzụ iji chepụta, mepụta ma nyefee ahụmịhe ọhụụ. Amata dị ka otu n'ime azụmaahịa 1000 kachasị na - eto eto kachasị ngwa ngwa maka 2021, ngbanwe ka kwupụtara ọkwa nkwado ọhụrụ na ụlọ ọrụ ntinye ego nke The Carlyle Group, yana Epic Games na-ewere obere osisi.
nwoghari xR enyeworị ike imepụta ezigbo oge mmemme maka ndị na-ese egwu dịka Katy Perry na Billie Eilish, azụmaahịa azụmaahịa dịka SAP na Siemens, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ dịka Mahadum nke Michigan, mgbasa ozi TV dịka MTV Video Music Awards na America's Got Talent, azụmahịa ụdị dị ka Nike na Under Armor na ihe karịrị 200 ndị ọzọ nwere ahụmịhe mebere karịa mba 35.
Ihe kacha ọhụrụ site n'aka Hannah Watkins (-ahụ ihe niile)
Zest4.TV na-adabere na Clear-Com iji weta Black Friday Online maka ndị na-ere ahịa PrettyLittleThing - May 13, 2021
GridMarkets Ego ya maka ndi Ahịa Zync - May 4, 2021
ngbanwe na-enweta ego gọọmentị UK iji mee ka mmepe mmepe nke mebere mepụta ngwa ngwa - April 22, 2021
dewe gbatịrị n'eziokwu xR 2021-04-09
Previous: OWNZONES hoputara Rick Capstraw dika onye isi ndi n’ego n’ego
Osote: PBT EU na-akwado PlayBox Neo 20 Channel na Igbe na Ndepụta OkwuNEXT Webinar